Raha mino ny fiampangan'ny manam-pahaizana ianao, dia saika ny olona tsirairay no manao firaisana ara-nofo. Ny soa entin'ny masturbation lahy dia ny hanamaivana ny adin-tsaina sy ny fihenjanana. Saingy tsy ny olon-drehetra dia samy manana ny heviny momba izany. Andao ho takatr'izy ireo, amin'ny fomba ahoana no ahafahana manalefaka ny fihenjanana sy ny fihanaky ny aretina.
Fomba fijerena masturbation lahy
Misy karazana azo antoka amin'io fahafaham-piraisana ara-nofo io. Miaraka amin'izy ireo, angamba, hanomboka:
Ilaina ny mahatakatra tsara ny penis amin'ny tananao ary mampihetsika ny tananao avy any ambany mankany an-tampony. Mba hahazoana fahafinaretana kokoa, amin'ity dingana ity dia mila mahatratra ny fifandraisana indrindra eo amin'ny tanana sy ny mpikambana ianao.
Ny rantsantanana efatra dia tokony ho eo an-tampon'ny penis, ary ny ankihibe eo ambaniny. Amin'ity tranga ity, azonao atao ny mampihetsi-po ny tananao amin'ny penis ary mahatsapa ny tari-dalana tsara. Ity fomba ity dia hanampy amin'ny fampitomboana fahafinaretana amin'ny ezaka kely indrindra.
Io fomba io no tsara indrindra ho an'ny tanora. Ilaina ny mihazona ny penis ho toy ny penina. Misaotra an'io fihetsika io, afaka mahatsapa tsaratsara kokoa ireo hetsika ianao ary manosika mora foana ny tananao. Ny tanana faharoa dia afaka mandray ilay scrotum ary mifandray amin'ny fotoana miaraka amin'ireo hetsika.
Mialà eo amin'ny sezanao amin'ny toerana mahazatra ary asio ny penis amin'ny tananao eo amin'ny fototra. Aorian'izany, mendrika ny hivezivezy, hametraka ny fanindriana amin'ny tànana faharoa ary manosika ny mpikambana hiorina mafy amin'ny tanany voalohany, ary miakatra. Azonao atao ny mitohy hatrany amin'ny rhythm. Mitandrema, raha vao mipaka fotsiny ny hetsika dia mahazo fahatsapana mahafinaritra kokoa.
Alamino miaraka amin'ny "tavoahangy" manoloana ny loha ny totohondry. Aorian'izany, azonao atao ny manosika ny mpikambana ao amin'ny totohondry ary manitatra ny tonelina amin'ny tanana hafa, ary mitambatra amin'ny fomba mitovy.
Ny tanana havanana dia mila mandripaka ny penis ary mihetsika sy mihodina, ary ny hafa kosa dia tsy maika mandehandeha eny ambony.
Fomba fijerin'ny lehilahy masturbation
Mety ho hafa tanteraka izany, ny zava-dehibe indrindra dia ny mampifaly anao sy ny fahafinaretanao ihany koa.
Ampiasao ny jiro iray, atsangano ny tampon'ny kofehy manely ny palmie amin'ny tanana hafa. Io fomba io dia mampiharihary tsara ny fiantraikan'ny fananganana amin'ny fifandraisana feno amin'ny firaisana ara-nofo.
Amin'io fomba io dia ilaina ny mandrotsaka ny penis sy ny kibo ambany. Aorian'izay, milosehina moramora amin'ny lambondriaka, ary eo amin'ny vavony ilay barika. Alefaso fotsiny avy any ankavia miankavanana izany, hamorona fihetseham-po mahafinaritra.
Vahao tanteraka ny penis, ny scrotum ary ny rantsan-tananao. Esory ny rantsan-tànanao, esory ny kofehibe eo anelanelan'izy ireo ary ampidino tsikelikely ny hetsika "ambany". Afaka manova ny hafainganam-pandeha sy ny herin'ny fanerena amin'ny tanana ianao, izany dia hanome fahafinaretana bebe kokoa.
Andramo fotsiny ny kofehy raha tsy avy amin'ny toerana misy ny lamboridy. Amin'ity tranga ity, dia mety ho tianao ny hikapoka azy sy ny andaniny. Farany dia ilaina ny mamono ny totohondry. Hahazo fahafinaretana be dia be ianao, ary ho tonga avy hatrany ny orgasma.
Ireo lesona momba ny fatran'ny masturbation lahy dia azo antoka sy mahafinaritra. Tsara ny manamarika fa tsy misy zavatra toy ny hoe "fiterahana malefaka." Afaka mahazo Mieritrereta ho anao ny fomba tsara indrindra. Azonao atao ny manandrana manasa orana, mampiasa legioma sy voankazo, ary zavatra hafa sy kilalao.
Mifandray amin'ny voalaza etsy ambony, misy olona maro manana fanontaniana, manadino ny filahianao ve? Raha ny fijerin'ny mpitsabo dia tsy misy fiantraikany ratsy ny masturbation. Ankoatra izany, raha misy lehilahy tsy miteraka voka-drindrina mavitrika mandritra ny fotoana lava dia mety hipoitra ao amin'ny prostate ny stasis. Amin'ireny tranga ireny, ny fampiasana masturbation dia tena ilaina, satria manampy amin'ny fiarovana ny olona amin'ny vokatra mampidi-doza. Fa ny manam-pahaizana dia mampitandrina fa ny fialan-tsiny matetika loatra dia mety hitarika ho amin'ny fahatarana amin'ny ejaculation. Amin'ireny tranga ireny dia sarotra ny mahatratra ny orgasme amin'ny namanao.
Mora haingana ny manentana ilay bandy?
Noho ny fiarovana amin'ny fitondrana vohoka?
Zodiac mirakitra firaisana
Fitiavana sy fahatsorana
Fanaovana firaisana ara-nofo
Mpifanaraka amin'ny tovovavy
Manamboatra plastika plastika
Yoga ao an-trano
Ny fitsaboana ny fananahana ao an-trano
Ahitra miaraka amin'ny vinaingitra apetaka amin'ny ririnina - fomba fitsaboana
Famintinana ny famantarana ny zodiaka
Ahoana no hanamboarana ingrerona amin'ny fahaverezan-danja?
Noho ny fandoroana pox heny iray?
Ireo trano avo indrindra
Ny fahanterana 13-14 herinandro